Baxoshiwe othisha bokudla ezikoleni | Isolezwe
Baxoshiwe othisha bokudla ezikoleni
Isolezwe / 11 February 2013, 10:31am / MHLENGI SHANGASE
UDR Nkosinathi Sishi ongumqondisi emnyangweni wezemfundo KwaZulu natal ISITHOMBE BONGANI MBATHA
INHLANZI ishelwe ngamanzi kothisha nothishanhloko abebephakela izikole ukudla KwaZulu-Natal asebekhonjwe indlela wuMnyango wezeMfundo asebebhekene namacala aphenywayo ngamaphoyisa.
Bangu-14 othisha asebekhonjwe indlela abaphenywa ngamaphoyisa ngokuba nezinkampani ezihlinzeka izikole ngokudla.
Kubona abayisithupha wothishanhloko, abayikhombisa othisha kuthi oyedwa kube wunogada.
Basebaningi nabanye abasazoboshwa ngoba othisha abakhonjwe indlela bakhipha abanye abathi nabo bebenza lo mkhonyovu.
Ngokomthetho womnyango othisha nabasebenzi bawo kabavumelekile ukuthi baphakele izikole. labo abenza lokhu basuke bephula imigomo futhi basuke benza inkohlakalo.
Inhloko yomnyango, uDkt Nkosinathi Sishi, ithe kuqale kuphenywa izisebenzi ezingu-32 okugcine ngokuthi ezingu-14 kuzo zikhonjwe indlela.
USishi uthe uphenyo lusaqhubeka kwezinye. nazo zizothathelwa izinyathelo ezinqala uma zitholakala zinecala. “Baningi nabanye esibaphenyayo manje emuva kokucula kwabanye bakhipha abanye abebethi basebenza nabo. Kulabo esingakafinyeleli kubona, siyeza ngeke siphumule bengathathelwanga izinyathelo. Umnyango awudlali futhi awusineki uma kuziwa enkohlakalweni,” kusho uSishi.
USishi ukusho lokhu ekhuluma neSolezwe ngemuva komhlangano nekomidi elibhekele ezemfundo esiShayamthetho, eMgungundlovu.
Uhlelo lokuphakela izikole luhlinzekwe ngo-R1.1billion kulo nyaka wezimali.
Kulo mhlangano uthe kabasineki ezikhulwini nakothisha abaqhubeka nokuphula imithetho yomnyango.
UMnuz Sipho “KK” Nkosi, oyilungu lekomidi, uthe kukhona izikhulu ezisebenzisa izihlobo zazo noma imindeni yazo ukuze zikwazi ukuhlomula kulolu hlelo.
Uthe kusenezikole ezibalelwa ku-15 okumele ngabe kuyadliwa kuzona kodwa okungakaze kudliwe kulokhu kuqale unyaka.
UNkk Judy Dlamini, oyisikhulu esibhekele izikole, uthe kukhona omunye uthishanhloko abathole ukuthi uphakela izikole eMajuba wathi uzomiswa.
“Inhloko yomnyango izosayina incwadi bese siyamumisa. Sisathola imibiko yokuthi abanye othishanhloko kabafuni ukusebenzisana nemifelandawonye noma izinkampani ezintsha eziphakela izikole kodwa bafuna izinto eziningi bakhale nangokudla. Abanye bathi ukudla akuthunyelelwe emizini yabo, abanye bathi kuphekwa i-rice elimbi,” kusho uNkk Dlamini.
Uthe bathola nemibiko abayiphenyayo yokuthi izimoto zikahulumeni okubalwa kuzo nezamaphoyisa, nezeminye iminyango okubalwa kuyo nowezokuThuthukiswa koMphakathi zike zibonakale ziyodiliva ukudla ezikoleni.
USishi ubuye waphawula nangezinga lokuqeqeshwa kothisha, into okuhlalwe kukhalwa ngayo kuleli kodwa wathi bona kabaqeqeshi othisha kodwa bayabaqasha kuphela.
“Sihlezi sithola izikhalazo zokuthi sinothisha abangenamava kodwa thina asiqeqeshi othisha siyabaqasha nje kuphela.
Sibathola emnyangweni wemfundo ephakeme okuyiwona obakhiqizayo. Siba nenkinga noma sekumele sihlunge abamaka umatric asibi nabo abantu abanamava,” kusho uSishi.